Igbo, John: Lesson 013 - Ndị nnọchiteanya Sanhedrin jụrụ Baptizim (Jọn 1:19-28) | Waters of Life
Home -- Igbo -- John - 013 (The Sanhedrin questions the Baptist)
25 Ha we jua ya, si, Gini mere i nēme baptism, ma ọ buru na gi onwe-gi abughi Kraist ahu, ma i bughi Elaija, ma i bughi onye-amuma ahu? 26 Jọn zara ha, si, Mu onwem nēji miri me baptizim: n'etiti unu ka otù Onye nēguzo Nke unu onwe-unu nāmataghi. 27Onye a bu Onye ahu Nke nābia n'azum, Onye mu onwem nēkwesighi itọpu eriri akpukpọ-ukwu-Ya. 28 Ihe ndia mere na Betani n'ofè Jọdan, ebe Jọn nēme baptizim.
Site na Torah ndị Juu mụtara banyere ịdị ọcha, ablutions na ụdị baptizim. Ablutions bụ ọcha site na omume rụrụ arụ, ebe baptism kwesịrị ekwesị bụ maka ọcha nke ndị na-abụghị ndị Juu, n'ihi na ha weere mba dị ka ndị na-adịghị ọcha. Ka o sina dị, ịnakwere baptism bụ ihe àmà nke ịdị umeala n'obi na ịbịakwute ndị Chineke.Nke a na-akọwa ihe mere ndị nnọchiteanya si na Jerusalem ji nwee mgbagwoju anya. "Gịnị mere ị na - akpọ ndị kwere ekwe ka ha chegharịa, ndị e biri úgwù na ndị mejupụtara kpamkpam n'ọgbụgba ndụ ahụ? Ị na - ele anyị anya dị ka enweghị nsọ ma chee na anyị furu efu n'iwe Chineke, anyị bụ ndị isi nke mba anyị?"Baptizim Jọn bụ ihe ịsụ ngọngọ nye ndị mmadụ "ndị nsọ". Ọ kewara ndị mmadụ n'òtù abụọ. Ìgwè nke mbụ bụ ndị ọcha site na baptism nke nchegharị. Ha ga-anakwere Kraist dịka ìgwè ndị a họpụtara ahọpụta njikere izute Onyenwe ha. Ìgwè nke abụọ jụrụ baptizim nke nchegharị, na-eche na ha ruru eru ịnakwere Kraịst. Ha chere na ọbịbịa ya ga-abụ maka ndọrọ ndọrọ ọchịchị ma ọ bụ nkwado iwu.
Ma eleghị anya, onye nkwusa ozioma Jọn, ya onwe ya nọ na nyocha a. Mkparịta ụka ahụ metụrụ ya n'ahụ, karịsịa ajụjụ nke ndị nnọchianya ahụ na Baptizim, n'ihi na ya na ha ha kwupụtara nkwupụta ya na ọ bụghị Kraịst, ma ọ bụ Ịlaịja ma ọ bụ onye amụma ahụ e kwere ná nkwa. Site na nzaghachi a, ha mere ka ihere mee ya ka o gosi na ya abughi onye o bula.Onye Baptist, n'amara ihe a ga-eme, mebiri onwe ya ma jiri ọnụ ọchị kwuo, sị, "I kwesiri, abughi m ihe dị mkpa. M na-eme baptizim nanị mmiri, na-enweghị anwansi ma ọ bụ ike. Ihe niile m na-eme bụ ihe atụ, na-ekwu maka Onye ahụ Bịa . "Mgbe ahụ, onye Baptist na ejiji kamel na-ebili ma jiri olu dara ụda gwa ndị isi nke ndị nnọchiteanya ahụ na ìgwè mmadụ ahụ, sị, "Ị kpuru ìsì, ị hụghị akụkọ ihe mere eme nke na-eme n'etiti gị. , onye bu nani obere onu ogugu, ma, lee, Kraist abiala ebe a n'etiti ndi mmadu a bu ndi mmadu bu ndi ozo, mu onwem, John Baptist, enweghi ike ime ihe obula. Abụ m olu, Mmụọ Nsọ gwara m banyere Onyenwe anyị nke na-abịa ugbu a, ọ nọ ebe a taa bụ ụbọchị nzọpụta. "Chegharịanụ ngwa ngwa, n'ihi na oge ikpe-azu na-agabiga."
N'okwu a, ìgwè mmadụ ahụ tụrụ ụjọ. Ha zukọtara n'ebumnuche iji nakwere Kraịst. Ma, ọ bịarutela, ha ahụbeghịkwa ọbịbịa ya ma ọ bụ hụ ya. Ha nwere nnọọ mgbagwoju anya na-ele ibe ha anya n'ijuanya.Mgbe ahụ onye Baptizim ahụ kwupụtara nkọwa ya a ma ama banyere Kraịst n'ime ihe akaebe nke doro anya karịa ihe onye dere akwụkwọ ozioma ahụ kwuru na amaokwu nke iri na anọ, "Onye na-abịa n'azụ m dị n'ihu m." Na onye a Baptist na-ekpughe mgbe ebighi ebi nke Kraist na n'otu oge ahụ ọnụnọ ya n'etiti ụmụ mmadụ. O mere ka o doo anya na Kraist bụ onye nkịtị dị n'etiti ha, onye a na-amaghị, na-enweghị ọkụ, uwe mara mma ma ọ bụ anya na-enwu ọkụ. Ọ dị nnọọ ka onye ọ bụla ọzọ, ọ bụghị ịpụ n'ụzọ ọ bụla. Ma n'eziokwu ya, ọ dị nnọọ iche na ndị ọzọ: Ọ dị tupu oge niile, eluigwe na Chineke, na-eguzo n'etiti ha n'ụzọ dị mfe.
Onye Baptist ahụ kwupụtara na ya erughị eru ịbụ ohu Kraịst. Omenala nke oge ahụ, bụ na mgbe a nabatara ndị ọbịa n'ụlọ ọ bụla, otu ohu ga-eji mmiri saa ụkwụ ha. Ebe ọ bụ na Jizọs bịara ìgwè mmadụ ahụ, onye Baptist ahụ chere onwe ya na ọ kwesịghị ịtọ ụcha akpụkpọ ụkwụ Jizọs iji saa ụkwụ ya.Okwu ndị a kpaliri ìgwè mmadụ. Ha jụọ ibe ha, sị, "Ònye bụ onye ala ọzọ a nso? Olee otú Onye-nwe-ayi si bụrụ onye nkịtị? Gịnịkwa mere Onye Nsọ Baptizim ji sị na ọ bụ onye na-erughị eru ịtọpu ụdọ akpụkpọ ụkwụ ya?" Ndị nnọchiteanya si na Jeruselem nwere ike ịsọ oyi na-anụ Baptist, dịka a ga - asị, "Baptist a bụ onye na - eme ihe ọjọọ!" Ya mere, ha hapụrụ. Ikekwe ụfọdụ n'ime ndị na-eso ụzọ Baptist na-agbaso ihe nlereanya ha, na-eche na Kraịst ga-apụta na isi obodo ha na Jerusalem n'ebube na ebube na ọ bụghị dị ka onye a na-amaghị, nke dị mfe n'ọzara. Ya mere ha choro ohere puru iche izute Kraist Chineke.Ihe ndị a mere n'ebe ọwụwa anyanwụ nke Jọdan, na-ede ihe karịrị òtù ndị Sanhedrin, n'ógbè dị n'okpuru ọchịchị Herod Antipas. Ya mere, ndị nnọchiteanya ahụ enweghị ike ijide Baptist ma were ya soro ha kpee ikpe na Jerusalem.
EKPERE: Onyenwe anyị Jizọs Kraịst, ekele gị maka ịbịakwute anyị, ezi mmadụ na Chineke ebighi ebi. Anyị na-efe gị ma too gị n'ihi na ị bịaruola anyị nso. Ị wedara onwe gị ala nke mere na ọ dịghị onye ọ bụla ma onye Baptist ga-amata gị. Ị dị umeala n'obi ma dị nwayọọ n'obi. K'anyị kụziere anyị ka ị dị umeala dịka gị na ịgbaso gị site na nduzi nke Mmụọ Nsọ gị.
Gịnị bụ ọnụ ọgụgụ kasị elu nke onye àmà Baptist nye Jizọs n'ihu ndị nnọchiteanya si Sanhedrin?
Page last modified on March 05, 2020, at 05:35 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)